I-Laser yokusika i-compressor yomoya, umatshini wepiston ongenawo i-oyile, i-laser ekhethekileyo yokuqokelela uthuli-Gunaiyou
Injini yepiston enoxinzelelo oluphezulu oyile
Injini yepiston engenawo ioli elungeleleneyo
Uhlobo lwe-engile ye-injini yepiston engenawo ioli
Umatshini wepiston we-oyile ophakathi kunye noxinzelelo oluphezulu
Umatshini wepiston ophakathi kunye noxinzelelo oluphezulu
Ukudibanisa umatshini woxinzelelo oluphezulu
Icompressor yomoya yokusika iLaser
Micro-oyile edityanisiweyo screw machine
Umatshini wepiston woxinzelelo oluphezulu
Umatshini odibeneyo ongenawoli othe cwaka
Laser uthuli umqokeleli
Isantya esiphantsi, umthwalo onzima, ukuzinza, ukusebenza kakuhle
Ukugcina ixhala kunye nokuqina / ukuqinisekiswa komgangatho
Ukususela ekusekweni kwayo, i-Taike Machinery Technology (i-Dongguan) Co., Ltd. igxile kwi-R & D kunye nokuveliswa kwee-compressor zomoya ezikhethekileyo zokusika i-fiber laser kunye ne-medium and high pressure oil-free piston machines. Kwintsimi yokusika i-fiber laser, ngokusekelwe kumava oshishino, siye savelisa i-compressors ekhethekileyo yomoya kunye nokususwa kothuli oluhambelana nokusingqongileyo kunye nezixhobo zokucoca ezifanelekileyo ukusika i-laser.
Ukudlala ividiyo kwakhona
I-compressor yomoya ekhethekileyo yokusika i-laser
I-Z-uhlobo lwe-oyile-free supercharger
V-uhlobo oyile-free supercharger
I-horizontally ichase i-oyile-free supercharger
W chwetheza umatshini woxinzelelo oluphakathi lwenqanaba lesithathu
Umatshini woxinzelelo oluphakathi lwenqanaba le-V
Umatshini ochaswe ngokuthe tye onamanqanaba amathathu oxinzelelo lweoyile (umthwalo onzima wamanzi-uhlobo olupholileyo)
Ukuchaswa ngokuthe tye umatshini woxinzelelo olunenqanaba eline-oyile (umsebenzi onzima wokupholisa amanzi)
Uphononongo lweGala yeLantern Festival!
Ngomhla weshumi elinesihlanu woMnyhadala weNtwasahlobo, bonke abasebenzi beNkampani yethu yeNsimbi yaseTaiyuan kunye neNsimbi bahlanganisene ukuze babhiyozele olu suku luhle. Unyaka ka-2020 ngunyaka ongaqhelekanga, ndibulela iingelosi ezimhlophe ezisilwa lo bhubhani, iinkokeli ezikhokele inkampani ukuba iphuhlise ngokuthe ngcembe, kunye namaqabane asebenze kunye kwikamva lenkampani. Wonke umntu ucingela ndaweni-nye, asebenze ndaweninye, akukho bunzima, asinakoyisa.
Oomatshini be-TISCO baba ngumthengisi wentsebenziswano weqhinga leLaser kaHan okwesine.
Ngentsimbi ye-10 nge-18 kaNovemba ka-2016, inkampani yethu, njengomthengisi we-Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd., yaya kwiNkomfa yoMboneleli "Yomgangatho wokuqala, uMgangatho udala ikamva" eququzelelwe nguHan's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. . I-Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd., inkokeli kushishino lwe-laser, yasekwa ngo-1996 kwindawo ephambili yohlaziyo kunye nokuvula-iShenzhen! Indawo elungileyo yoshishino apha yenze ukuba iLaser yaseHan iphumelele inyathelo ngenyathelo kwaye ibe yinkokeli kushishino lwezixhobo zaseTshayina.
Isakhiwo se-D, i-Hengsheng yeSayensi yokusiNgqongileyo kunye neTekhnoloji yePaki, i-Xi Village, yena (yena), idolophu yaseShatian, isiXeko saseDongguan, kwiPhondo laseGuangdong